Hindi iyo Ingriis
w:or:india Hindiya ama Jamhuuriyadda Hindiya waa wadan ku yaala Aasiya waana wadanka Aduunka ugu dadka tirada badan marka laga reebo Shiinaha. Wadanka waxoo xuduud la leeyahay, wadamada Bakistaan, Shiinaha, Nebal, Butaan, Bangladesh iyo Burma. Dhinaca xeebaha neh waxoo xuduud la leeyahay wadamada Siri Laanka, Jasiirada Maldiif, iyo Indonesia. Magaalo madaxda wadanka waa New Delhi. Wadanka Hindiya waxaa degan dad gaaraayo in ka badan 1 Biliyan oo qof, waxaana lagu hadlaa luqado gaareeso in kabadan 100af. Hindiya waa wadanka afaraad oo ugu ganacsiga badan aduunka.
Sannadkii 2017, dhaqaalaha India wuxuu ahaa kii lixaad ee adduunka ugu weyn ee soo gala GDP iyo saddexaadna ugu weyn iyada oo la iibsanayo sinaanta awoodda. Ka dib markii dib loo habeeyay dhaqaalaha suuqa ee sannadkii 1991, Hindiya waxay noqotay mid ka mid ah dhaqaalaha ugu wayn ee koraya, waxaana loo tixgeliyaa waddan cusub oo warshad leh. Si kastaba ha ahaatee, waxay sii wadi doontaa caqabadaha saboolnimada, musuqmaasuqa, nafaqo-xumada, iyo daryeel caafimaad oo aan ku filnayn. Dawlad hubka nukliyeerka ah iyo awoodda gobolka, waxa uu leeyahay ciidanka labaad ee ugu weyn dunida oo dhan, waxana uu ku jiraa shanaad kharashka militari ee ka dhex jira quruumaha. Hindiya waa Jamhuuriyad Federaali ah oo ay maamusho nidaamka baarlamaanku waxayna ka kooban tahay 29 dawladood iyo 7 dhul-beereed. Waa jaaliyado badan oo kala duwan, jinsiyado kala duwan iyo jinsiyado kala duwan, waxayna sidoo kale ku nool yihiin noocyo kala duwan oo duur joog ah oo ku yaal deegaanno kala duwan.
6 Waddanamaha degaan Hindia
Hindiya waxee leedahay Taariikh aad u dheer. wadanka waxuu jiri jiray kumanaan sano kahor. Gumeestihii ingriiska ayaa soo gumeestay Hindiya iyo pakistaan, markooda hore waxee ahaayeen hal wadan. waxeenaxornimada qateen1947kii, waa markii ee Bakistaan iyo Bangladesh ee ka go'day Hindiya.pakistan waxee hindiya ooga go'day kala duwanaashaha diinta. Hindiya waa wadan laga caabudo hindu, pakistaana waa wadan muslimiinta ku badanyihiin labada qeebood dagaalo badan ayaa dhexmaray sanado badan. Kadib sanadka marka uu ahaa 1948kii ilaa 49kii, Hindiya iyo pakistaan waxaa ka dhex jiray dagaalo dagaaladaas oo sabab u eheed kala qeebintii Gobolka Kashmir. Luqada ugu ween oo Hindiya looga hadlo waa af hindi iyo luuqada ingriiska Wadanka Hindiya waxaa laga caabudaa Lo'da became India's first prime minister in 1947. Mahatma Gandhi (right) led the independence movement.]]
Waddanamaha degaan Hindia[wax ka badal | wax ka badal xogta]
United Kingdom 38,000+
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Hindiya&oldid=233759"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 4 Abriil 2022, marka ee eheed 03:08.